တရုတ်နိုင်ငံ၏ နှစ်စဉ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း ၇ ဘီလီယံရှိ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ မြို့တော် ပေကျင်းရှိ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးသောနေရာတစ်ခုတွင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် ပြင်ဆင်နေသောကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ နှစ်စဉ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းသည် အကြိမ်ရေ ၇ ဘီလီယံစာထိ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန (MIIT) အရ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ဆေးနောက်ဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းအားကို ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် ပေကျင်းမြို့ရှိ အမျိုးသားလုပ်ငန်းကွန်ဖရင့်၌ MIIT ဝန်ကြီး Xiao Yaqing က ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မရှင်မှ အချက်အလက်များအရ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်အထိ တရုတ် ပြည်မကြီးတွင် ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေ ၂.၆၈ ဘီလီယံ ထိုးနှံထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
China’s annual COVID-19 vaccine production capacity hits7bln doses
Source: Xinhua| 2021-12-20 20:25:17|Editor: huaxia
BEIJING, Dec. 20 (Xinhua) — China’s annual COVID-19 vaccine production capacity has reached7billion doses, according to the Ministry of Industry and Information Technology (MIIT).
The country’s latest capacity was announced on Monday by MIIT Minister Xiao Yaqing atanational work conference in Beijing.
More than 2.68 billion vaccine doses had been administered on the Chinese mainland as of Sunday, data from the National Health Commission showed. ■
Photo : A medical worker preparesadose of COVID-19 vaccine atavaccination site in Beijing, capital of China, Dec. 9, 2021. (Xinhua/Zhang Yuwei)
Related Topics:chinaCOVID_19 VaccineProductionCapacityXinhuamyanmarတရုတ်